Biyo-qaybiyeyaasha facilities Goobaha dadweynaha • Xafiisyada • Garoomada Diyaaradaha • Bangiyada • Xafiiska boostada
Ma u baahan tahay biyo-wade ka shaqeeya xarumaha dadweynaha, xafiiska, garoonka diyaaradaha, bangiga? Shirkadda Water Point ayaa bixisa Biyo-siinnada Biyo-la’aanta ah, cabbayaasha, isha laga helo hogaamiyayaasha adduunka ee warshadaha, oo aan annaga u nahay qaybiyaha gaarka ah ee Poland.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee jirka bini aadamka waa biyaha. Hawo siinta jirka iyo qanacsanaanta haraadka ayaa saameyn wanaagsan ku leh caafimaadka iyo dhammaan howlaha nolosha ee jirkeenna.
Baahida biyaha ayaa sii kordheysa gaar ahaan xagaaga, marka aan dareemno harraad badan xilliyada cimilada kulul. Sidaa darteed, xalka wanaagsan ayaa ah ilo, ilo iyo biyo-cabitaanno biyo-cabbiraad ah kuwaas oo si aad ah ugu sii kordhaya meelaha dadweynaha.
Aaladahaani waxay bixiyaan biyo nadiif ah oo caafimaad leh. Thanks to tubooyinka lagu dhejiyay, qof walba wuu cabbi karaa biyo macaan oo dhadhan ah ama wuxuu ku buuxin karaa dhalada ama dhalada biyaha. Bixiyeyaasha biyo-cabidda casriga ah waxaa loogu talagalay qaab aan ahayn oo keliya dadka waaweyn iyo carruurta, laakiin sidoo kale waayeelka ayaa si fudud u isticmaali kara.
Biyo cabitaanka waxay bixiyaan biyo buuxiya dhammaan heerarka looga baahan yahay, sidaa daraadeedna waa badbaado in la cabbo iyo, intaa waxaa u dheer, aad u dhadhan fiican.
Bixiyeyaasha noocan oo kale ah ee biyaha lagu cabo waxaa lagu meeleeyn karaa goobaha dadweynaha, suuqyada wax laga iibsado, garoomada diyaaradaha, jardiinooyinka iyo xarumaha isboortiga, iyo sidoo kale shirkadaha, iskuulada iyo isbitaallada.
Qalabkani wuxuu dadka ku nool meelahaas ka dhigayaa inay dareemaan xasillooni iyo daryeel caafimaadkooda iyagoo cabbaya biyo nadiif ah oo nadiif ah.
Biyo la cabo oo la cabbo waa in la helaa meel kasta oo aan waqti badan ku qaadno, oo mar walba fursad uma lihin inaan ku iibsano biyo nadiif ah ama cabbitaan kale. Biyo-waraabiyaasha waraabiyayaashu kaliya maahan il biyo nadiif ah oo dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale, iyaddoo ay ugu wacan tahay naqshadooda guud iyo tan casriga ahba, waa cunsur dheeri ah oo saamaynaya qurxinta goobaha dadweynaha.
Biyo la cabbo waxay biyo si hufan gaarsiin karaan, iyadoo la yareynayo bixinta biyaha iyo bixinta qaybinta, iyo bixinta dood deegaanka iyadoo si weyn hoos loogu dhigo isticmaalka dhalooyinka caagga ah iyo yareynta wax soo saarka qashinka.
Biyo la cabbo iyo biyo-baxa oo dhan waxay gacan ka geystaan ​​kobcinta qaab nololeed caafimaad leh iyagoo sameysanaya caado ah cabitaanka biyo dabiici ah oo aan ahayn cabbitaannada macaan.
Bixinta qaddar aan xadidneyn oo biyo nadiif ah, oo laga heli karo meel kasta oo dadweynaha ka tirsan saacadda oo dhan, waxay kordhineysaa hab-dhaqanka caafimaad-qabka iyo wacyigelinta dabiiciga ah ee bulshada, waxayna si weyn hoos ugu dhigeysaa kharashyada la xiriira qashin-qubka hore ee magaalada.
Biyo la cabbo, ilo iyo ilo ayaa sidoo kale badbaadiya waqti, meel iyo lacag horay loogu kharash gareeyay keydinta biyaha dhalada ku jira.
Biyo-cabeyaasha biyaha laga cabo waxay ka kooban yihiin qalab casri ah, iyagoo hubinaya cimri dherer iyo qarashaad hooseeya.
Qaabka ku habboon ee aaladda ayaa hubinaysa in biyaha la keenay ay leeyihiin tayo sare, cusub iyo dhadhan fiican, oo dabcan microbiologically ahaan amaan ahaan lagu badbaado.
Bixiyeyaasha biyo-xoon-biyoodkanadiifi biyaha tuubadabiyo gelinta garoonka diyaaradahaBixiyeyaasha biyaha ee bangigabiyo-siiyaha xafiiskaBixiyeyaasha biyaha ee xafiisyadaBiyo-cabista biyo siinta xafiiska boostadaBixiyeyaasha biyaha gugabiyo kaarboon ahbiyo kulultoosan tubbadabiyo xafiisyobiyaha garoonka diyaaradahabiyaha xafiiskabiyaha tuubada caafimaadka qababiyo qabowbiyaha guga ee xarumaha dadweynaha